Home Wararka Cabdikarin Guled, Sharif Xassan iyo Cabdiwali Gaas siyaasad ma isku darsan karaan? Maxa...
Cabdikarin Guled, Sharif Xassan iyo Cabdiwali Gaas siyaasad ma isku darsan karaan? Maxa ka soo baxay shirkii Nairobi?
Waxaa habeen hore magaalada Nairobi ku kulmay Sharif Xassan iyo Cabdikarin Guuleed oo kali ah iyaga oo ka hadlayay sidii ay u abuuri lahaayeen Xisbi Mucaarad ah kaas oo shaqo ka bilaabayo isku aruurinta xubnaha Baarlamaanka Fedaraalka Soomaaliya ee hadda ku jira baalamanka. Kulankaan ayaa daba socday kulan sadax geesood ah oo horay uga dhacay Naironbi.
Cabdikarin Guuleed ayaa waxa uu ku jiraa walaac siyaasadeed oo uu dirbiyada madaxa kula dhufanaayo:
Sadaxdii bilood ee la soo dhaafay waxa uu ku mashquulsanaa sidii looga dhigi lahaa Ra’iisal Wasaaare oo u u badali lahaa Xassan Cali Kheyre isaga oo kulamo kala duwan u qabtay qaar ka mida beeshiisa iyo Mucaaradkaba.
Horay waxa uu uu ugu soo fashilmay wadahal uu sanadkii hore la furtay dowlada Farmaajo oo uu doonaayay in uu Wasiir uu ka noqodo. Kulanktaas ayaa ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Hadaba hadda maxuu qorshaynayaa? Waxa uu habeenadii u danbeeysay kulamo gooni gooni ah uu kula jiray Sharif Xassan iyo Cabdiwali Gaas oo ku sugan magaalada Nairobi. Kulamadaas ayaa ujeedadoodu ahayd sidii loo abuuri lahaa Xisbi siyaasadeed oo ay sadaxdooda ku mideysan yihiin kaas oo salka ku hayn doono wax qaybsiga 4.5. Qorshaha ayaa ah in la helo labada maqan Dir iyo “others”.
Hadaba qorshaha cusub ee Cabdikarin Guuled muxuu ku soo kordhin kara jawiga siyaasadaeed ee jira ? mid ka siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdishu ayaa u sheegay MOL in ay nasiib xumo tahay in Cabdikarin Guuled wali raji ka gasho in uu dib ugu soo noqdo siyaasada Soomaaliya. Waxa uu yiri. “wax kastaa uu soo qabtay noloshiisa 30 kii sano ee u danbeeysay waa ku dhamaatay fashil, haba u danbeeyso mas’uuliyadii uu Xasssan Shiikh u dhiibay oo uu dhamaantood iska casilay markii uu ku fashilmay gudashadooda”. Waxa uu intaas ku daray “ kuwii wax ku darsada Cabdikarin iyo iyagaba waa wada qasaareen”.
Dhanka kale Cabdkarin Guuled ayaa kulamo dhuumasho ah la qaatay Fahad Yasin oo ku sugnaa Nairobi. Kulamadaas ayaa ka dhacay Hotelka Radisson Blue ee Nairobi dabaqa lixaad, Kulamadan ayaa looga hadlay sidii Cabdikarin Guuled u noqon lahaa qorshaha labaad (Plan B) mar hadii ay dhacdo in Fahad isku hayn waayo Kheyre iyo Farmaajo. MOL wali ma helin xogta rasmiga ah ee ka soo baxay shirkaas qarsoodiga ahaa?.
Horay waxa Nairobi ugu kulmay sadax mas’uul Axmed Madoobe , Sharif Xassan iyo Cabdiwali Gaas oo ku heshiiyay in ay dib u wada kulmaan sadax bilood ka dib.
Ugu danbeeyn su’aashu waxa ay tahay Cabdikarin Guled, Sharif Xassan iyo Cabdiwali Gaas wax ma isku darsan karaan?